Wednesday October 03, 2018 - 12:09:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
iska hor'imaad khasaara dhaliyay ayaa ka dhacay deegaan hoos yimaad degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe.
sawir hore deegaanka Ceelbaraf
Wararka ka imaanaya deegaanka Ceelbaraf ayaa sheegaya in iska hor'imaad xooggan uu halkaas ku dhaxmaray maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka.
Ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay iska hor'imaadka oo yimid kadib markii ganacsatada deegaanka ay weerareen isbaaro ciidamada dowladdu dhigteen halka loo yaqaan Carra kaawada oo saldhig ay ku leeyihiin ciidamada AMISOM.
Askariga dhintay oo magaciisa lagusoo gaabiyay (Batuuq) ayaa caan ka ahaa deegaanka wuxuuna taliye u ahaa ciidamo isbaaro dhigtay wadada jaayga ah halkaas oo gaadiidka dadweynaha ay lacago baad ah uga qaadi jireen.
Xiisado udhaxaysa dadka deegaanka iyo ciidamo tirayar ah oo katirsan dowladda Federaalka ayaa lagasoo sheegayaa deegaanka Ceelbaraf oo kamid ah deegaannada ay xoogga ku joogaan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi.